Yako turnkey pcb uye Assembly mudiwa muChina-Kingford
Garandi Repair Service
Vanachandagwinyira pcb kugona
Simbi pcb kugona
Pcb Assembly Zvishongedzo
Pcb Yekuongorora Laborator
Kugona kwenguva refu pcb
Yakavanzika Policy Chibvumirano
Anovimbwa pcb gungano ruzivo neanopfuura makore makumi maviri.
Imwe-mira mhinduro yeOEM, PCBA uye Turnkey Assembly
Fast kumumvuri pcb Assembly mukati 7days
6 Yamaha SMT mitsara + 2 Thru-Hole Assembly mitsara
Chiitiko chakavimbika neanopfuura makore makumi maviri.
Yakakwira Sanganisa, Yakaderera-Pakati Vhoriyamu pcb inosvika makumi matanhatu marara
Multi-rukoko, HDI, Microwave, Metal Core pcb
Zvemhando Zvitupa zvine ISO 13485 uye IATF 16949
Dhatabhesi rinobatanidza ne1000+ vatengesi vepamutemo
100% yepakutanga nyowani uye inoteedzereka
Kutsvaga kune zviuru zvishanu++ zvikamu
Rigorous kuuya inishuwarenzi uye mhando kutonga
Akangwara Sisitimu ye3D DFA / DFM Solution
Maminetsi matatu Tsvaga Nyaya paPCBA isati yagadzirwa.
Kupa Yakakwana 3D DFA / DFM Mishumo
Tsigira CAD / Gerber Dhata Sosi
Dhizaini & kuendesa otomatiki bvunzo jig / zvigadziriso
"AOI kuongorora, X-ray kuongorora, ICT kuyedza,
FCT kuyedza, kupisa-mukuyedza "
Kuongorora rekodhi & mhedzisiro inoteedzana
30+ pcb marongerwo mainjiniya
Max Rukoko Nha. 40, Max Chiratidzo Kumhanya: 56G
Min mukaha weBGA PIN: 0.3mm, Min L / S: 3 / 3mils
Max Pin Qty: 160000+, Max BGA Zvakawanda: 60+
Shenzhen KINGFORD TECHNOLOGY CO., LIMITED ibhizimusi repamusoro-soro rine PCBA yekugadzira zvine hungwaru, ichipa dhizaini yePCB, kugadzira, uye zvinhu zvinowana sevhisi yekubatsira kune vatengi vedu vanotarisira. Kuzvimiririra kutsvagisa uye kusimudzira kweiyo indasitiri PCBA yekutanga-tinya yakangwara quotation system iyo inogona kupedzwa mumasekondi gumi PCB, BOM, mari yekugadzirisa, inowirirana yakabatana Intelligent chirimwa uye cheni yekutengesa, kuti uwane kurongeka nekukurumidza mumaminetsi matatu, uye masvondo 1-2 yekukurumidza kutumira.
● Chiitiko chakavimbika neanopfuura makore makumi maviri.
● Iva nehungwaru DFM system yekudzora prototype nguva uye kuwedzera kugona kweR & D.
● Imwe-yekumira sevhisi, Pcb Kugadzira uye Gungano, Zvikamu Sourcing, IC kuronga uye Kuyedza sevhisi.
● Hapana chikumbiro cheMoQ, Tarisa pane Yakakwira Sanganisa, Yakadzika uye Pakati Pakati vhoriyamu.
● Kupa maawa makumi maviri nemana Pamutsetse webasa.
● Semuenzaniso sevhisi iri mukati memazuva manomwe ekushanda!
● 2018-Kuvhurwa kweShenzhen PCBA & Turnkey inogadzira fekitori.
● 2016-Kuvhura Hubei PCBA & Turnkey yekugadzira fekitori.
● 2012 - Kuwedzera bhizinesi kuPCBA & Turnkey kugadzira.
● 2009 - Kuvhura Meizhou aluminium pcb yekugadzira fekitori.
● 2005 - Akazadzisa Certification eIATF16949, ISO13485, ISO9001, ISO14001, UL ， IPC.
● 2004-Kuvhurwa kweKingford PCB fekitori- (Well-tech) muHuizhou.
● 1999 — Yakagadzwa Kingford Technology.
Hunhu ndeimwe yezvatinonyanya kukoshesa.
Kuenderera mberi nekuvandudza manejimendi danho kuita kuti vatengi vazorodze.
Yakanyatso kudzora zvinoenderana neIPC zviyero kuona 100% inokodzera mwero wekutumira mhando.
√ IATF 16949: 2016 13 ISO 13485: 2016
√ UL (E352816) √ IPC Nhengo
Chiono: Kuve shamwari inovimbwa yevatengi vepasirese. Kuendesa yakanyanya kukosha kune vatengi, vashandi uye vagovani.
Basa: Kupa zvemhando yepamusoro, nenguva uye zvinogutsa masevhisi ePCB yekugadzira uye musangano.
indasitiri ipi yatinoshandira
Kingford inotsigira vatengi uye nekuvapa izere-sevhisi mhinduro kune rese chigadzirwa chigadzirwa chehupenyu hwemagetsi zvigadzirwa uye masisitimu. Tine hunyanzvi hwese uye hunyanzvi hwekupa zano vatengi pazvinhu zvehunyanzvi hwekugadzirisa, kubvira pakutanga kwechigadzirwa dhizaini chikamu kusvika uye kusanganisira yekupedzisira-yehupenyu chikamu chechigadzirwa; uye isu tinoita kudaro pahwaro hweyakanakisa yakazara mutengo wevaridzi musimboti.
Zvinowanzoitika zvikonzero zvekuchema nekuchinja magetsi (2)
Chii chinonzi PCB Assembly kugadzirwa kwacho
Abstract: Mune iyo PCB Assembly kugadzirwa maitiro, yakawanda producti ...
Chii chinonzi Passive Zvikamu zvePCBA?
Abstract: Passive Zvikamu zvinogona kureva kune zvemagetsi zvigadzirwa tha ...
Taura yekuvandudza maitiro e smt indasitiri muSMT pcb gungano
Abstract: SMT pcb gungano inonzi pamusoro-gomo kana pamusoro pegomo ...
Ndeapi mazano anofanirwa kuteverwa pcb kopi bhodhi
Abstract: Pcb kutevedzera ibasa rinonetesa. Kana usiri carefu ...
Ndeapi akasiyana matanho epcb board?
Abstract: Pcb bhodhi ndiyo yepasi zvinhu, iyo inozopedzisira yakanyorwa ...
Mamwe matipi ekuvandudza kupisa kupisa kwePCB yekuratidzira kwe LED
Abstract: Ma LED anogona kuoneka kwese kwese, saka ndedzipi nzira f ...
Ndeapi mazano anofanirwa kucherechedzwa muDFM yebasa ongororo?
1 | Kugadzira Iyo yakasarudzwa nzira yekugadzira inofanirwa kuve iyo corre ...
Zviitiko zvinokonzeresa kuongororwa kweDFM uye maitiro ekuzvigadzirisa.
Chinangwa cheDFM ndechekuderedza mitengo yekugadzira isina kukanganisa ...
Chii chinonzi Dhizaini yekugadzira muPCB Assembly?
Nhanganyaya i. Dhizaini yekugadzira: Nhasi, kuronga ...
Kanopfuura kamwe chete isu takaraira kuungana kwemapuraneti ematunhu akadhindwa kubva kuKINGFORD Kuisirwa kwe smd uye dip. Pese pataigamuchira mabhodhi emhando yepamusoro. Paive pasisina muchato. Zvinonyanya kufadza kuti odha yacho yaigara ichizadzikiswa nenguva. Zvese zviri panguva, uye nekudaro ako ekupedzisira haafanire kumbomiswa
Kusarudza kontrakta, isu takatarisa pane zvakaitika uye nehunyanzvi hweedu watinodanana naye. KINGFORD yakazadzisa zvizere zvatinotarisira pakuronga kutengwa kwezvinhu, kugadzirwa uye kuungana kwemabhodhi ematunhu akadhindwa. Isu tinotarisira kuenderera mberi nekubatana!
Adress: 3rd Floor, A1 Kuvaka, Fuqiao Wechitatu Industrial Zone, Fuyong, Bao'an Dunhu, Shenzhen, China
Runhare: + 86-18929306972
BOM & Gerber Mafaira
Kune iyo Assembly service isu tinoda kuti mutengi ape zvese maBOM neGerber mafaera, izvi zvinodiwa kuti vape mitengo chaiyo uyezve nemutengo chaiwo wegungano rePCB.Ndokumbirawo titumire seemail attachment. sales@kingfordpcb.com
Yako turnkey pcb & gungano mudiwa muChina